Semuenzaniso & mutengo - Xiamen Kinghow Kunze Chigadzirwa Chigadzirwa Co., Ltd.
Kuzvipira Kwedu Kune Kugutsikana Kwako Kwakazara
Muenzaniso uri kutumirwa kune vatengi unofanirwa kurarama zvinoenderana nezvavanotarisira sezvo sarudzo yavo ichatsamira pahunhu hweiyo sampuli. KuOEM kana iwe ukabvunza semuenzaniso, isu hatisiye dombo risingashandurwe kuti uve nechokwadi chekuti iwe unowana mhando yepamusoro yakagadzirwa zvakakwana.
Kazhinji mutengo unoenderana nerudzi rwejira uye hunyanzvi hwechigadzirwa. Kana isu tichishanda pane chirongwa vagadziri vedu uye mahunyanzvi vanowanzo kukwidziridza mutengo wese kuti uuye nemakwikwi mitengo yako you.r mutengi).
Kunatsiridza uye Mazano
Pese mukuvandudzwa kweprojekiti tinoramba tichitarisa mune runyorwa rwemazano kuti tizive kuti ndedzipi shanduko dzinogona kuitwa mukugadzirwa kwechigadzirwa kuti zviwedzere kunakidza nekutengesa.
Yedu huru yekutarisisa ndeyekuti chigadzirwa chako chibhadhare (kwauri) uye yepamusoro (yemutengi).
Tinopa vatengi vedu rusununguko rwakakwana rwekutaura zvavanoda uye kutaura zvavanenge vachitsvaga pavanouya kuOEM. Mushure memisangano yakati wandei zvinofungidzirwa kuti mutengo wekutora unenge wakasununguka kana kudzoserwa.
Isu tinonzwisisa kukosha kwesampling sezvo ichitamba chikamu chakakosha chekuona mutengo uye mhando yechigadzirwa. Chinangwa chedu ndechekugadzira muyero wekutengesa zvakakwana kuitira kuti ugone kumisikidzwa seyakajairwa kugadzirwa kwese. Icho chikamu chebasa reboka redu revanyanzvi kugadzira rondedzero yehunyanzvi matauriro echikwata chekugadzira. Isu tinosanganisirawo kutengesa uye QC zvikwata mumusangano wedu wepamberi wekugadzira uyo uri kutungamira nechikwata chekugadzira uye chinotarisira pakudzidza nezve ruzivo rweodha yako uye kujeka kwayo.
Nyanzvi Dzinoraira ZveMitengo Nyaya
Haufanire kuvhunduka kana iwe uchiona zvichinetsa kuenderera nemutengo uye une hanya nekusvika pane chako chaunoda.
Kwemakore, OEM yakave inokwanisa kugadzira mabhegi ayo ari emakirasi ese. Isu tinogara tichida kwazvo kukubatsira iwe nematambudziko emutengo wako. Nemagadzirirwo edu ane hunyanzvi uye mahunyanzvi zvinogoneka kutsvaga dzimwe sarudzo kureva mamwe machira, zvishongedzo uye dhizaini kudzora mutengo weprojekiti yako.
Chichava chirevo chedu kukupa iwe chigadzirwa chinonyatso kusangana nezvako.